Inkxaso yokubambisana noonwabo mahala | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Ukuyeka Ukuzixhamla Ukuhamba Namaxholongwane Okuninzi
Ukuphila kwihlabathi langoku, ukuba ufuna ukuyeka iphonografi ukuze uphile ubomi bokwabelana ngesondo nge-porn mahala unokungakwazi ukuyeka ukusebenzisa i-laptop, ithebhulethi okanye i-smartphone obukade uyibukele. Kuya kufuneka uyisebenzisele imfundo, umsebenzi kunye nobomi bakho bentlalo.
Kukho izicwangciso eziliqela zokuncedisa.
Njalo qalisa ngokususa zonke iifoto ezivela kumadivayisi akho. Ingaba yinkomfa, kodwa eli nyathelo lithumela ingqondo yakho ingumqondiso wokuthi injongo yakho yokutshintsha i-ironclad. Khumbula ukucima i-back-ups kunye nedoti. Kanti uphinde ulahle onke amabhukumaka kwiisayithi ze-porn kunye nomlando wakho wesiphequluli.
Ukuba usebenzise i-VPN okanye iNtetho yangasese eyimfihlo, kufuneka kwakhona.
Hambisa ifanitshala yakho ujikeleze okanye wenze olunye utshintsho kwindawo obukela kuyo iphonografi. Iimpawu zokusingqongileyo ezinxulunyaniswa nokusetyenziswa zinokubangela amandla kuba zona ziyayikhupha i-dopamine. Cinga ukusebenzisa izixhobo zakho ezikwi-intanethi kuphela kwindawo yabucala engadibaniyo nokusetyenziswa kwe-porn. Okanye utshintshe indawo yakho 'ye-porn'. Lahla 'isitulo sokugcoba' okanye uhambise ifenitshala yakho ngeenxa zonke.
Cinga ukuthintela iphonografi. Iibhlokhi ezingamanyala zokuphila ngokukhululekileyo ezingamanyala ayizizo ezobudenge. Zifana nesantya-esingqindilili. Bakunika ixesha lokuba uqaphele ukuba sowuza kwenza le nto ungafuniyo ukuyenza. Kwangoko kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ngaphambi kokuba iindlela zokuzibamba kwingqondo yakho zibuyiselwe ekusebenzeni ngokupheleleyo, iibhloksi zinokuba luncedo kakhulu. Ekugqibeleni, awuyi kubafuna.
EBritani, uMboneleli weNkonzo ye-intanethi (ISP) kufuneka akuvumele ukuba ukhethe ukusebenzisa izihlungi zabantu abadala kwinkonzo yakho ebanzi. Oku kuyafumaneka kwi-Virgin Media, Sky, BT kunye neTechTalk. Hlola nge-ISP yakho. Inkonzo yokukhusela ihlala ikhululekile. Iinkonzo zokuvimbela azikwazi ukungagqibekanga ekugcineni konke ukugqithisa, kodwa kufuneka banele ngokwaneleyo ukuba abantu abaninzi bayeke ukuzonwabisa.
Ukuba ubukela iphonografi kwiselfowuni yakho ungacela inethiwekhi yakho ukuba isuse ukufikelela 'kumxholo wabantu abadala'. Sukuba neentloni.
Iprojekti yokukhusela i-porno yamahhala iyatholakala kulezi ziza:
Iifowuni zefowuni kumanethiwekhi anjenge-EE kunye ne-T-Mobile engagqibekanga kwisitenki somxholo esakhiweyo esicinga ukuba umntu abe ngaphezu kwe-18 kwaye asebenzise ikhadi lekhredithi ukuze afumane umxholo omdala. Oku kubonakala kusebenza ngokufanelekileyo ukugcina umxholo wecalaphini. Qhagamshelana nenkampani yakho yefowuni uncedo olongezelelweyo ukuvimba umxholo xa kuyimfuneko.
<< Ukufumana Uncedo I-TRF ye-3-Inyathelo lokubuyisela imodeli >>